Top 5 Metrics na Investments Marketers na-eme na 2015 | Martech Zone
Maka oge nke abụọ, Salesforce nyochara ndị ahịa 5,000 n'ụwa niile iji ghọta ihe kacha mkpa maka 2015 gafee ọwa dijitalụ niile. Nke a bụ nnyocha nke akụkọ zuru ezu nke ị nwere ike ibudata na Salesforce.com.
Ọ bụ ezie na nsogbu ịma aka kachasị emetụ bụ mmepe azụmaahịa ọhụụ, ogo ndị ndu, yana ijikọ na teknụzụ, otu ndị ahịa na-esi emefu ego na etu esi aga n'ihu na-atọ ụtọ:
Mpaghara 5 kacha elu maka itinye ego na ahia ahia
Ebe-Dabere Mobile Ndepụta
Ezie na e nwere ihe na-abawanye na emefu na-elekọta mmadụ na mobile, e nweghị na-ezere eziokwu na email bụ na-anọgide ike nkwurịta okwu na-ajụ maka ọ bụla digital atụmatụ.
Usoro ahia ahia 5 kacha elu maka ihe ịga nke ọma
Afọ Ojuju Onye Ahịa
Ọnụ Ahịa Nkwụnye Ahịa
Nnweta Ndị Ahịa
Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya… mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mkpanaka na-enweta nlebara anya ka ukwuu, mana usoro metụtara ihe metụtara ịdebe ndị ahịa dị ukwuu yana inweta ndị ọhụụ!
Tags: 2015ahịa nnwetaọnụego njigide ndị ahịaobi ụtọ ndị ahịaekwentị-dabeere na ekwentị nsusonnyocha marketerntinye ego ahiaahịa metricsmobile ngwalaghachi azụmaahịannweta egondị ahịasalesforce.commgbasa mgbasa ozi mgbasa ozintinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụSocial Media Marketing
Ndi 2015 Ahịa Ahịa Strategy Na-ekpuchi Tredị Ndị A?